Madax sare oo ka tirsanaa Sirdoonka Somalia oo sheegay inuu hayo xog ku saabsan in ay DF askar u dirtay Tigraay (Sharraxaad ku saabsan ”dhimashada” badan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Madax sare oo ka tirsanaa Sirdoonka Somalia oo sheegay inuu hayo xog...
Madax sare oo ka tirsanaa Sirdoonka Somalia oo sheegay inuu hayo xog ku saabsan in ay DF askar u dirtay Tigraay (Sharraxaad ku saabsan ”dhimashada” badan)
(Muqdisho) 20 Jan 2021 – Agaasime Xigeenkii hore ee Nabad Sugidda Qaranka ayaa ku baaqay in baaris madax bannaan lagu sameeyo askar Soomaali ah oo la sheegay inay ka qaybgaleen kaddibna ku.le’deen dagaalka Gobolka Tigraay.
Cabdisalaam Guleed ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inuu hayo xog ku saabsan jiritaanka askartaasi, isagoo dhanka kale xusay inay dagaalka ku dhinteen dhowr boqol oo iyaga ka mid ah, sida uu yiri.
Askartan ayaa la sheegay in tababar qarsoodi ah loo geeyey dalka Badda Cas dhaca ee Eritrea, iyadoo ay isaga soo tarayaan qoysas ku doodaya inay ilmohoodii la’yihiin, kuwaasoo ay qaarkood lasoo xiriireen Hadalsame Media, kuwaasoo sheegay in ilmohooda ay ugu dambaysey maalintii laga qaaday 2018-kii, waloow aynaan caddayn karin in loo qaaday dagaalka Itoobiya.
“Waxaa xog isoo gaarsiiyey taliyeyaasha Itoobiya oo ii sheegay in ciidamada Soomaalida ah iyo kuwa Eritrea oo ay maamulayeen saraakiil Eritrean lagu diley dagaalka Tigraay. Ma jirto sabab ay been iigu sheegaan.” ayuu yiri Guuleed, waloow la is waydiin karo sababta ay saraakiil Itoobiyaan ihi ugu sheegayaan sir qaran nin aan wax saamayn ah hadda arrinta ku lahayn, xilna aan xitaa haynin.
Wuxuu Guuleed ku dooday in sababta loo ”laayey” askarta faraha badan, sida ay warar aan la xaqiijini sheegayaan, ay tahay khibrad la’aan, aqoon darro ku saabsan dhulka laga dagaallamayo iyo saraakiisha Eritrean-ka ah oo iyaga iska hormarinayey, sida uu ku dooday.
Ninkan ayaa ka jawaabayey beenin ka timid Wasiirka Warfaafinta DF, Xasan Dubbe oo inkiray inay Somalia ciidan u dirtay dagaalka Tigraay.
Previous articleWax kasta oo aad uga baahan tahay munaasabadda caleemo saarka ah (Maxaa dhici doona caawa?)
Next article”Taas waa diidney!” – MW Faransiiska uu si cad uga dhaartay inuu raalli gelin ka bixiyo xasuuq uu Faransiisku u gaystey dal Muslim ah oo uu gumaystey